Cayman Islands: Performance inoratidza kusimudzira kwekushanya kwakasimba
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kuputsa Kufamba Nhau » Cayman Islands: Performance inoratidza kusimudzira kwekushanya kwakasimba
Nhau Nhau • Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • Cayman Islands Nhau • Hospitality Industry • nhau • Kutarisirwa • ushanyi • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Kufamba Wire Nhau • Akasiyana Nhau
Kushanya kwaStayover kwakaramba kuchikwira kune iyo Cayman Islands muna Gumiguru nevanosvika 23,798 vanhu, 5.76% kuwedzera, kana 1,297 vamwe vashanyi kupfuura Gumiguru 2018.
Kwenguva yaNdira kusvika Gumiguru 2019, nzvimbo yacho yakatambira vashanyi 410,088 10.00 stayover, iyo inomiririra kukura kwe2018% panguva imwechete ya37,276, kana kuwedzera kweva 7.4 vashanyi vestayover. Huwandu hunopfuura hwese hwaNdira kusvika Gumiguru vanosvika manhamba emakore akapfuura akanyorwa, chiitiko chinotsigira chimwe chezvinangwa zvehurumende yekushanya yekukurudzira hupfumi hweCayman Islands. Inofungidzirwa kuti mari yevashanyi yakazara yakawedzera ne747.4% kusvika US $ XNUMX mamirioni munguva yese iyi.
"Zviri kusimbisazve kunzwa zvakanaka maitiro edu ekurwisa mari mukusimudzira mabhizimusi ezvekushanya 'mari yekuwana mari panguva yatinoona mwaka wepafudzi," akadaro Gurukota rezveKushanya, Hon Moses Moses Kirkconnell. “Bazi ranga rakatsiga mukuzvipira kwaro kubazi redu pamwe nenzanga yose kuti riunze mikana mizhinji yekuita mabhizimusi, kudzidziswa nekusimudzira kune avo vanofarira zvinoitwa zvine chekuita nekushanya, zviito zvinonyanya kuvimba nevanosvika nendege kuti vachengetedze bhizinesi rinobudirira. "Hurumende yangu inotsigira zvakasimba basa rakazvipira reDhipatimendi Rezvekushanya kuwedzera kushanyirwa, nekuziva, kweCayman Islands kutenderera pasirese kuona kuti tawedzera mikana inogadzira zvakanaka mubato redu nemabhizinesi ane pamusika uyu."
Kuendesa iyo nhamba yehuwandu mwedzi wega wega ibasa rakakosha reDOT, iro basa rekutsvagisa ndere kutsigira zvinangwa zvekupinda nekupa data rakavimbika, ruzivo runobatsira, uye ongororo yekuronga ramangwana, kuita sarudzo, uye kuronga kwemitemo. Izvi zvinosanganisira kukwirisa kunoenderera kwezvakagadzirwa zvine chekuita nekutsvaga zvinowanikwa kuruzhinji. Parizvino, iyo DOT inopa online online data data mune iri nyore-kushandisa fomati kune vanhu vanoda manhamba ane chekuita nezvekushanya. Ikozvino kuwedzera kumishumo yekutsvagisa yakapihwa ndeye 2019-yemwedzi mipfumbamwe snapshot infographic inowanikwawo online kune yepamutemo Cayman Islands webhusaiti.